SIDEE AYEY KU YIMAADEEN TODDOBADA GOBOL EE MAGACAABAN WALINA AAN GOLAHA XEER DEJINTU ANSIXININ?.Qalinkii Mohamed Dhimbiil
Friday November 12, 2021 - 02:08:56 in Wararka by Super Admin
SHURUUDAHA GOBOL AMA DEGMO CUSUB LAGU MAGACAABI KARO ;
1- Baaxada dhulka ay ku fadhido
2- miisaanka iyo baaxada dadweynaha deegaanka ku nool .
3- wax soo saarkeeda iyo khayraadkeeda dabiiciga ah ee ay leedahay.
4- isku filaanshaha adeegyada bulshada ee degmadu waa in ay hanan kartaa 60% miisaaniyadeeda ugu yaraan.
Haddaba ma loo eegay shuruudahani goboladaasi iyo degmooyinkaasi xiligii la magacaabay ? Waa su'aal u baahan isweydiin iyo in jawaab loo helo .
MAXAA DHALIIL KA SOO BAXAY GOBOLADA IYO DEGMOOYINKA CUSUB EE XUKUUMADIHII KALA DAMBEEYEY SAMEEYEEN ?.
1- qaar qaranka ku ah qoqob iyo kala gurid dadka jamhuuriyada Somaliland oo gobolo badan oo haybta ama qabiilooyinka waaweyn ee dalku isku dhex deganaa waa la kala guray , xaga degmooyinkana jufo waliba tuuladeedii ayaa degmo looga dhigay.
2- Dhaqaale la'aan soo food saartay degmooyinka maadaama aan shuruudaha loo eegin oo sababtay in dawlada dhexe ay kab dhaqaale ku bixiso degmooyinka oo dhan si adeegyadii dadku u baahnaa looga hirgaliyo.
3- Kharash iyo xilal hadh beelay oo u baahan in degmo waliba ka hesho miisaaniyada dawlada dhexe mushaharka xubnaha fulinta , gaadiid , shidaal iwm .
4- Degmooyinkii oo ah qaar isku wada muuqda oo aan badhkood xataa tuulooyin u dhaxeyn ileyn waxa lagu bixiyey nidaam siyaasadeed e .